Dhaqdhaqaaqyo Ciidan Oo Laga Dareemayo Deegaanka Godinlabe Ee Gobalka Galgaduud – STAR FM SOMALIA
Ciidamo badan oo ka tirsan Maamulka Galmudug, ayaa la geeyay deegaanka Godinlabe oo ka tirsan Gobolka Galgaduud, kuna yaallo inta u dhaxeysa Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado ee Gobolkaasi.
Arintaan waxa ay ka dambeysay iyadoo dagaal u dhaxeeya ciidamada Galmudug iyo Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe uu ka dhacay Magaalada Caabudwaaq, welina dagaalka uu ka taagan yahay Magaaladaasi.
Taliyaha ciidamada Booliska deegaanka Godinlabe Maxamed Ciise Nuur, ayaa sheegay ciidamadaan la geeyay Godinlabe in looga gol leeyahay xaqiijinta ammaanka Magaalada, wuxuuna sheegay xalay inay bandoow ku soo rogeen deegaankaasi.
Taliyaha Booliska Deegaanka Godinlabe, ayaa sheegay bandoowga Magaalada lagu soo rogay inuu socon doono muddo 15 cisho ah, xilliga habeenkii ayuu bandoowga si rasmi ah u dhaqangelayaa, waxaana ujeedka uu yahay sidii ammaanka loo xaqiijin lahaa.
Ciidamada la geeyay Magaalada ayaa Koontaroolo ka sameystay duleedyada Magaalada si ay halkaasi amniga uga xaqiijiyaan.
Dhinaca kale warar soo baxaya ayaa sheegaya Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe inay ciidamo geeyen deegaanka Maraarguur oo ka tirsan Gobolkaasi una dhaxeeya Cadaado iyo Magaalada Dhuusamareeb.
Xiisada u dhaxeysa Maamulada Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe iyo Maamulka Galmudug ee fadhigiisa uu yahay Magaalada Cadaado, ayaa sii kordhaysa xilli saaka dagaal uu ka qarxay Magaalada Caabudwaaq.